दीपेन्द्र नजन्मिदै ज्योतिषीको भविष्यवाणी र जन्मदै उम्रेको दाँत देखेर यसरी आत्तिएका थिए महेन्द्र (भिडियोसहित)
June 5, 2020 4233
‘सरकार ! नवयुवराज पैदा होइबक्स्यो ।’युवराज्ञी ऐश्वर्यकी सहयोगी प्रेमा सिंहले दुई हात जोडी धनुष्टङ्कार शैलीमा निहुरिएर प्रणाम गर्दै भनिन् । कुनै ठूलो बोझले थिचिँदा उत्पन्न हुने बेचैनी राजामा प्रस्ट देखिन्थ्यो ।
बैठककक्षमा तनावमय मुद्रामा घरि यता त घरि उता गरिरहेका राजा महेन्द्रलाई युवराज्ञी ऐश्वर्यकी सचिव प्रेमा सिंहले ढोकैमा उभिएर नाति पैदा भएको खबर त्यसरी सुनाएपछि राजा महेन्द्रले ‘धत्तेरी’ भन्दै सल्किए’को चुरोट’को ठुटो भुइँमा फाले र खिन्न हुँदै भने, ‘बर्बाद भयो ।’निकै उत्साहित भएर प्रेमा महाराजाधिराजलाई खुशीको खबर सुनाउन गएकी थिइन् ।
खुशीको खबर सुनाउँदा पनि राजामा विस्मात पूर्ण भाव प्रकट भएको देखेर उनी स्तब्ध भइन् । हात जोडिएको थियो प्रणाम गर्न, जोडिएको जोडियै भएछ उनको ।राजालाई तनाव’मा देखेर उनी झ’स्किन् र दर्शन गरेर फर्किइन् । राजा थच्च काउचमा बसे र टोलाइरहे ।
चुरोटको आगो गलैँचामा सल्किएर निस्किएको धुवाँले उनको मुद्रा भङ्ग गऱ्यो । उठे र आगो निभाउँदै डस्टबिनमा चुरो’टको ठुटो फ्याँकिदिए ।फेरि काउचमा बसे । र, हातमा निधार अड्याएर निहुरिरहे ।
पछि ठुलो भएपछि युवराज दीपेन्द्र शाह बहुप्रतिभाशाली भएर निस्किए । उनी लोकगीत गाउन खप्पिस थिए । विभिन्न भाकामा गीत गाएर मज्जा लिन्थे । उनी लोक गायक गायिकाहरुसँग बसेरै गाउँथे र गाएको सुन्थे । जब दिपेन्द्र लोकगीत गाउन थाल्थे रोकिनै कठिन हुन्थ्यो । उनी भाका हाली हाली जोसका साथ गाउँथे ।पढाईमा समेत अब्बल थिए ।
पीएचडी गर्ने धोकोका साथ भूगोल अध्ययन गरेका थिए । भूगोल कठिन विषय हो । उनी भूगोलमा एमए गरिसकेका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भूगोलका गोल्ड मेडलिष्ट पनि हुन् । दीपेन्द्र खेलकुदमा पनि अब्बल थिए । उनको मनपर्ने खेल बक्सिङ थियो । आफै बक्सिङ पनि खेल्थे ।
उनमा केही खराब लत पनि थियो । भनिन्छ उनी बेला बेलामा ला’गूपद्धार्थ सेवन गर्थे । विशेषगरी गाँ’जा र कहिलेकाहीं च’रेश से’वन गर्थे । दरबार ह’त्याकाण्डमा पनि उनले कालो प’द्धार्थ से’वन गरेको भनिएको छ । त्यो कालो पद्धार्थबारे स्पष्ट नभएपनि च’रेशको शं’का गरिएको छ ।
दरबार ह’त्याकाण्ड हुँदा उनी २९ वर्षका थिए । विवाहको विषय चलिरहेको थियो ।राजदरबार ह’त्याकाण्ड छानविन आयोगका अनुसार पारिवारिक भोजमा उनैले आफ्ना परिवारहरूको ह’त्या गरिदिएका हुन् । यो जुन १, २००१ को साँझको कुरा थियो । आयो:गले दीपेन्द्रले आफ्ना पिता–माता, भाइ–बहिनीलगायतको ह’त्या गरी आफूले आफ्नै टाउकोमा गो’ली हा’नी आ’त्मह’त्या गरेको जनाएको थियो ।
सरकारले गठन गरेको आयोगको आधिकारिक भनाइअनुसार दिपेन्द्रले नै आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई आमसं’हा’र गरेका थिए । किनभने उसको विवाहको बारेमा परिवारमा विवाद चुलिएको थियो । विवाद सृजनाले उनी अत्यन्त रू’स्ट थिए । दिपेन्द्रको चाहना थियो दुलहीको रूपमा देवयानी राणा’लाई दरबार भित्याउने । देवयानी रा’णा राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणाका छोरी हन् ।
राणा वेराज इतिहासमा पशुपती शम्शेर राणाहरू ‘ग’ वर्गका राणाहरू हुन् । राणा र शाह खानदानबीच वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुने एउटा परम्परा थियो । यद्यपि, राजपरिवारका शाहहरूले ‘क’ वर्गका राणाहरूस“ग मात्रै विवाह गर्दथे । ‘क’ श्रेणीका राणाहरूले आफूलाई श्री ३ घोषित गर्दै २००७ साल सम्म नेपालमा आफ्नो शाषन चलाएका थिए ।
जसलाई हामी १०४ वर्षको राणा शासन भनेर बुझ्दछौं । यी दुई महाराज वंशजहरूको नेपालमा वैवाहिक सम्वन्धको लामो इतिहास छ ।सरकारी छानविन आयोगको भनाइअनुसार देवयानीसँग विवाह गर्ने दिपेन्द्रको चाहना विरू’द्व उनकै आमा रानी ऐश्वर्य उभिएकी थिइन् । यसैकारण, दिपेन्द्रले नियमित शाहीभोजमा परिवारको ह’त्या गरिदिएका हुन् ।
उसबखत उनले धेरै मा’दकपदार्थ पिएका थिए । मृ’तकहरूमध्ये दिपेन्द्रका बुवा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, आमा, भाइ र बहिनी पनि थिए । भनिन्छ— त्यसपछि दिपेन्द्रले आफ्नै टा’उकोमा पे’स्तोल प’ड्काए । दिपेन्द्रले तीन दिनसम्म कोमामा मृ’त्युसँग स’ङ्घर्ष गरे । यसै बेला अस्पतालको शै’यामै उनलाई राजा घोषित गरिएको थियो । उनको जुन ४ मा मृ’त्यु भयो । लगत्तै उनका काका ज्ञानेन्द्र राजा भए । – स्वदेश नेपाल बाट
Prevआज जेठ २३ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
Nextजात तगारो बन्यो प्रेममा, खेम सेन्चुरीको ‘कामी दाईको छोरो’ सार्वजनिक (भिडियो’सहित)
सचिन परियार र रचना रिमालको पहिलो गीत “सेतो कपास” भाइरल (भिडियो सहित)
मेरो क्या’न्सर लागेको बुवालाई ठिक पार्दिनुस् बरु हामी भोकै बस्छौ,कठै छोरी (भिडियो सहित)
भैंसीसँग टिकटक बनाउँदै गर्दा यी महिला माथि आइपर्यो नसोचेको फसाद (भिडियो सहित)
अब नेपालमा साउन १ गतेदेखि यस्ता मोबाइल नचल्ने, आखिर किन ? सरकारले दियो यस्तो जानकारी
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (107950)
स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (69483)
हेर्नु’होस् नेपाली सेनाको यस्तो क’ठोर …. जुन भिडियो संसारभरी भाइरल (भिडियो हेर्नु’होस्) (68559)